ZTE enwere ike ịmanye ịgbanwe aha ya ịlaghachi na arụ ọrụ | Gam akporosis
The ZTE opera opera na United States enweghị ebumnuche ịkwụsị n'oge adịghị anya. Companylọ ọrụ ahụ kwetara na ọnọdụ niile enyere ya iwu site na America. N'ụzọ dị otú a, emere usoro mbụ ka ụlọ ọrụ wee nwee ike ịrụ ọrụ ọzọ. Eketie nte ke utịt ama ekpere ndien ke m wouldbịghike mmọ ẹfiak ẹnyọn̄ ke mme edinam mmọ.
Asịrị ndị ọhụrụ ga-abata dị mma, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị abụcha ya. Ebe ọ bụ na o yiri ka ZTE adịlarị nso iji nwee ike ịrụ ọrụ na United States. Agbanyeghị, ọ dị ka maka nke a, ụlọ ọrụ ga-agbanwe aha ya.
Otu n'ime ọnọdụ ọhụrụ enyerela United States, bụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-ekewapụ azụmaahịa ya n'ụzọ doro anya. N'ụzọ dị otú a, n'otu aka, ha ga-enwe usoro azụmaahịa ekwentị mkpanaaka na ngwaọrụ ndị ọzọ na-azụ ahịa. Ha abụọ kewara ekewa.
Ọzọkwa, a na-atụ anya ya ZTE guzobe otu ndi otu ndi oru no na China. Isi ihe kpatara nke a bụ enweghị ntụkwasị obi na enwere nnukwu mmetụta gọọmentị nke mba Eshia nwere na ụlọ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na mba ha.
Ya mere, o yikarịrị ka ekwentị ZTE ga-abata n'okpuru aha ọzọ na ahịa. Axon bụ aha nke yiri ka ọ na-enweta isi na ịkụ nzọ. Mana rue ugbua enweghi nkwenye sitere n'aka ndị na-emepụta China. Ya mere, anyị ga-echere ịchọpụta ihe ndị ọzọ.
Anyị ga-ahụ ka akụkọ a si pụta, nke dị ka ọ naghị abịa na njedebe. Mgbe ọkụ dị na njedebe nke ọwara ahụ dị nso karịa mgbe ọ bụla maka ZTE, Amabeghị mgbe ha ga-enwe ike ịrụ ọrụ ọzọ n'ahịa. Anyị na-atụ anya ịnụ gị n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE nwere ike ịgbanwe aha ya ka ọ rụọ ọrụ na United States